Kungani Usebenzisa iDrupal? | Martech Zone
Ngisanda kubuza Yini iDrumal? njengendlela yokwethula iDrupal. Umbuzo olandelayo oza engqondweni uthi "Ngifanele ngisebenzise iDrupal?"
Lo ngumbuzo omuhle. Izikhathi eziningi ubona ubuchwepheshe futhi okuthile ngakho kukukhuthaza ukuthi ucabange ukubusebenzisa. Endabeni yeDrupal kungenzeka ukuthi uzwile ukuthi amanye amawebhusayithi ajwayelekile asebenza kulolu hlelo lokuphathwa kokuqukethwe komthombo ovulekile: I-Grammy.com, WhiteHouse.gov, ISymantec Xhuma, Kanye Isibukeli saseNew York, ukubala ezimbalwa (ngaphezulu I-Drupal isetshenziswe lapha izifundo zocwaningo ku Drupal.org)
Kepha kungani uDrumal? Kungenzeka yini ukuthi amasayithi angenhla angasetwa ngawo WordPress, Joomla!, noma I-DotNetNuke?
Kungani Izinhlangano Zisebenzisa I-Drupal
Umphakathi wabathuthukisi unamandla futhi uyabandakanyeka. Amamojula anikelwe okuyisisekelo esiyinhloko seDrupal. Lawa ma-module anikelwe, enziwe izinkulungwane zabantu, anweba ukusebenza kweDrupal ukusiza ukuhlangabezana nezidingo ezithile ezingaphezulu kwalokho Umgogodla Drupal. Namuhla, kunamamojula angaphezu kuka-5000 anikelwe weDrupal 6 (ukukhishwa kwamanje). Abanikeli bala ma-module basebenza nokwenza iDrupal ibe ngcono futhi isebenziseke ngokuthuthukisa izinhlobo ezilandelayo zeDrupal. IDrupal 7, nje ikhishwe ngoJanuwari 5, 2011, iqukethe izithuthukisi zokwenza iDrupal ibe lula ukuthunyelwa, ukusekelwa, nokuthuthuka ngokuhamba kwesikhathi. Futhi iDrupal 8 imane iqalisa ngecebo elenza iDrumal ibengcono kakhulu.
Izinhlelo zemvelo zebhizinisi leDrumal zikhona. Njengephrojekthi yomthombo ovulekile, amabhizinisi asebenzayo nachuma athuthukile azungeze iDrupal. Lokhu kusho ukuthi kunezinkampani ezakha amawebhusayithi nezinhlelo ezihlanganisiwe ngeDrupal ukuxhasa izidingo zamakhasimende amakhulu namancane. Lokhu kusho nokuthi iDrupal icatshangelwa kakhulu lapho izinkinga ezinzima zidinga izixazululo ezinamandla. Isibonelo izinkampani ezinikezela ngemikhiqizo / izinsizakalo zeDrumal zifaka I-Lullabot (ukubonisana nokuqeqeshwa), Ukuthola (ukusingathwa okukhethekile nokusekelwa), Isigaba: // Ubuchwepheshe (ukwakheka okwenziwe ngezifiso, ukusatshalaliswa komphakathi kweDrumal, ukubonisana), I-Volacci (I-Drupal SEO), futhi Palantir.net (ukuklama nokusebenzisana). Kuningi, okuningi okuningi kuyatholakala ku- IDropal.org Marketplace.
Ama-meetups ajwayelekile e-Drupal ayenzeka emhlabeni jikelele. Kunabantu okufanele baphendukele kubo lapho kudingeka ochwepheshe. Ku- ukuhlangana komuntu zenzeka njalo emadolobheni amaningi amakhulu namancane emhlabeni wonke. Ngokwengeziwe, yonke iDrupal ihlangana ngesikhathi I-DrupalCon. Lo mcimbi ophindwe kabili ngonyaka (iNyakatho Melika ne-EU, ukushintshana) kuhlanganisa abantu abangaphezu kuka-3000 ukuxoxa, ukufunda, ukufundisa, ukuthola, nokuzijabulisa ngaseDrupal.
I-Drupal isekwe yiminye imiphakathi yezimboni. UDrupal uthole ukwesekwa okuvela ku: Google, ngaphansi kwayo Uhlelo lwehlobo lwekhodi, ukusiza ukwandisa ukusebenza kwe-Drupal nezici; i UJohn S. noJames L. Knight Foundation unikeze izibonelelo ukuqhubekisela phambili umqondo wokushicilela kahle okuqukethwe ku-inthanethi; Sony Music unikeze amaqembu azinikele ukusiza ukunweba iDrupal abese enikela lezo zithuthukisi emuva emphakathini waseDrupal; noThomson Reuters basize ukuthuthukisa nokuhlanganisa Calais ku-Drupal ukusiza ukunweba i-semantic, iwebhu engasebenziseka.
I-Drupal akuyona nje ucezu lwesoftware ekhululekile ukulanda futhi izame. Inabantu bangempela ababandakanyekayo, abaxazulula izinkinga zangempela, futhi basebenzela ukwenza iwebhu, ulwazi, nobuchwepheshe kube lula ukuzisebenzisela thina sonke. Lokhu kusho ukuthi kunabantu ongaphendukela kubo kalula ukusiza ukwenza iwebhusayithi yakho ibengcono.
Bheka le infographic enhle emlandweni weDrupal kusuka Izinsiza zewebhusayithi ye-CMS:
Tags: ukuphathwa kokuqukethweuhlelo lokuphatha okuqukethweDrupalukuthuthukiswa Drupali-infographic ye-drupalumlando we-drupalisingeniso ku-drupalyini i-drupalkungani usebenzisa i-drupal
Mar 29, 2011 ku-9: 58 PM
@trufflemedia - Bengihlala njalo ngibheka iDrupal njengengxenyekazi engcono yokuthuthukiswa kwenethiwekhi yezokuxhumana kunesayithi noma okuqukethwe kwebhulogi. Ngalokho, i-WordPress iyintandokazi yami (mathupha). Imicabango?
Mar 30, 2011 ku-3: 03 AM
UDoug, usuyazi vele ukuthi ngikhona lapho kuwe kwi-bandwagon ye-WordPress yama-CMS namabhulogi. Sinamakhasimende asebenzisa noma asebenzise iDrupal noJoomla futhi ukuvumelana phakathi kwabo bekulokhu ukuthi i-WordPress kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kuliqiniso, iDrupal inenzuzo kwezinye izimo, kepha lokho kumbalwa futhi kukude kakhulu ngombono wami.